गौतमबुद्ध विमानस्थललाई तीन अर्ब – EngineerKhabar
By इन्जिनियर खबर	 On १५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १८:३२ 0
सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । हाल करिब ७४ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको सो विमानस्थलका लागि मात्रै सरकारले रु तीन अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो विमानस्थललाई प्रमुख प्राथमकितामा राखिएको बताउनुभयो । यस्तै निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई रु आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । धावनमार्ग निर्माण भइसकेको सो विमानस्थल सन् २०२० को अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलको रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । अन्य केही विमानस्थललाई रात्रिकालिन उडान हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका नजिकै अर्को आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिनेछ भने धरहरा बनाउन रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
हेटौंडा-काठमाडौं जोड्ने कान्ति लोकपथ सडक निर्माणका लागि ६१ करोड बजेट
नेईए निर्वाचन: पिनबाट बागमती प्रदेशमा ई. बिनोद सापकोटाको नेतृत्वमा उम्मेद्वारी:…
ई. राजेन्द्र प्रसाद हाडाको नेतृत्वमा ने.ई.ए केन्द्रमा इन्जिनियर समाज नेपालको…
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको चुनावमा एमाले-जसपा गठबन्धन [सम्झौता पत्र सहित]